नक्कल सामग्री दण्ड: मिथक, वास्तविकता, र मेरो सल्लाह | Martech Zone
एक दशक भन्दा बढीको लागि, गुगल डुप्लिकेट सामग्री दण्डको मिथक लडिरहेको छ। किनकि म अझै यसमा प्रश्न फिल्ड गर्न जारी राख्छु, त्यसैले मैले यहाँ छलफल गर्न लायकको लाग्यो। सर्वप्रथम, मौखिक कुरा छलफल गरौं:
के हो नक्कल सामग्री?
नक्कल सामग्री सामान्यतया डोमेन भित्र वा भित्र पूर्ण सामग्री ब्लक गर्न को लागी संदर्भ गर्दछ जुन कि अन्य सामग्रीसँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ वा यो सराहनीय मिल्दो छ। अधिकतर, यो मूलमा भ्रामक छैन।
गुगल, डुप्लिकेट सामग्री हटाउनुहोस्
नक्कल सामग्री दण्ड के हो?
पेनाल्टी भनेको तपाइँको साइट या त अब खोजी परिणामहरूमा पूर्ण रूपमा सूचीबद्ध छैन, वा तपाइँको पृष्ठहरू विशेष कुञ्जी शव्दहरूमा रैंकिंगमा नाटकीय रूपमा कम गरिएको छ। त्यहाँ कुनै पनि छैन। अवधि गूगल २०० my मा यस मिथ्यालाई खारेज गर्‍यो अझै मानिसहरूले यसलाई अझै पनि छलफल गर्छन्।
यसलाई एक पटक र सबैको लागि ओछ्यानमा राखौं, मान्छेहरू: त्यहाँ "डुप्लिकेट सामग्री दण्ड दण्ड" जस्तो कुनै चीज छैन। कमसेकम, धेरै जसो मानिसहरू मतलब जब उनीहरूले त्यसो गर्छन् मतलब हुँदैन।
गुगल, डुप्लिकेट सामग्री पेनल्टी डिमाइसिफाइ गर्दै
अर्को शब्दहरु मा, तपाइँको साइट मा नक्कल सामग्री को अस्तित्व तपाइँको साइट को दंडित गर्न जाँदै छ। तपाईं अझै खोजी परिणामहरूमा देखाउन सक्नुहुन्छ र नक्कल सामग्री सहित पृष्ठहरूमा अझै राम्रो क्रमबद्ध गर्न सक्नुहुन्छ।
गूगल किन तपाईं नक्कल सामग्री बेवास्ता गर्न चाहनुहुन्छ?
गुगलले यसको खोज इञ्जिनमा एक उच्च प्रयोगकर्ता अनुभव चाहान्छ जहाँ प्रयोगकर्ताले खोजी परिणामको प्रत्येक क्लिकको साथ मूल्यको जानकारी फेला पार्दछ। नक्कली सामग्रीले त्यो अनुभवलाई बिगार्न सक्छ यदि खोजी ईन्जिन परिणाम पृष्ठमा शीर्ष १० परिणामहरू (SERP) सँग समान सामग्री थियो। यो प्रयोगकर्तालाई निराश पार्ने छ र यो खोज इञ्जिन परिणामहरू कालोहट एसईओ कम्पनीहरूले खपत हुने छ खोजी परिणामहरूमा वर्गीकरण गर्न सामग्री फार्महरू निर्माण गर्न।
साइटमा नक्कल सामग्री साइटमा कार्यका लागि आधार होइन जबसम्म यो देखा पर्दैन कि नक्कल सामग्रीको अभिप्राय भ्रामक हुनुपर्दछ र खोज इञ्जिन नतीजाहरूको हेरफेर गर्नुहोस्। यदि तपाइँको साइट नक्कल सामग्री मुद्दाहरु बाट ग्रस्त छ ... हामी सामग्रीको संस्करण छनौट गर्न राम्रो काम गर्छौं हाम्रो खोज परिणामहरूमा देखाउन।
गुगल, नक्कल सामग्री सिर्जना गर्नबाट बच्नुहोस्
त्यसोभए त्यहाँ कुनै पेनाल्टी छैन र गुगलले प्रदर्शनका लागि संस्करण छान्नेछ, त्यसोभए तपाईंले किन गर्नुपर्दछ नक्कल सामग्रीबाट बच्नुहोस्? दण्डित भइरहेको बावजुद, तपाईं मई अझै राम्रा दर्जा गर्ने तपाईंको क्षमतालाई चोट पुर्‍याउँछ। यहाँ किन छ:
गुगल सम्भवतः जान लागेको छ परिणाममा एकल पृष्ठ प्रदर्शन गर्नुहोस्… एक ब्याकलिks्कको माध्यमबाट सबै भन्दा राम्रो अधिकार संग र त्यसपछि परिणामबाट बाँकी लुकाउन गइरहेको छ। नतिजाको रूपमा, अन्य नक्कल सामग्री पृष्ठहरूमा राखिएको प्रयास केवल एक फालतु हो जब यो खोज इञ्जिन श्रेणीकरणको लागि आउँदछ।
प्रत्येक पृष्ठ को रैंकिंग भारी मा आधारित छ प्रासंगिक ब्याकलिlin्क बाह्य साइटहरूबाट तिनीहरूलाई। यदि तपाईंसँग समान सामग्रीको साथ pages पृष्ठहरू छन् (वा समान पृष्ठमा तीन मार्ग), तपाईं प्रत्येक पृष्ठमा ब्याकलिंक्स हुनसक्दछ बरु ती सबै ब्याकलिks्कहरू भन्दा ती मध्ये एकमा अग्रणी। अर्को शब्दहरुमा, तपाई एकल पृष्ठ सबै ब्याकलिks्क सks्कलन गर्ने र राम्रो र्याकिंग गर्ने क्षमतामा चोट पुर्‍याउँदै हुनुहुन्छ। शीर्ष परिणामहरूमा एकल पृष्ठ श्रेणीकरण पृष्ठ २ मा pages पृष्ठ भन्दा धेरै राम्रो छ!
अर्को शब्दहरूमा ... यदि मसँग नक्कल सामग्री सहित pages पृष्ठहरू छन् र ती प्रत्येकमा back ब्याकलिks्कहरू छन् प्रत्येकले ... यसले १ rank ब्याकलिंक्सको साथ एक पृष्ठ पनि दर्जा दिदैन! नक्कल सामग्रीको मतलब यो हो कि तपाईका पृष्ठहरू एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् र ती सबैलाई चोट पुर्‍याउन सक्दछन् बरु एक महान, लक्षित पृष्ठलाई श्रेणीकरण गर्नु भन्दा।
तर हामीसँग पृष्ठहरूमा केहि नक्कल सामग्री छ, अब के ?!
वेबसाइटमा नक्कल सामग्री हुनु पूर्ण स्वाभाविक हो। उदाहरणको रूपमा, यदि म B2B कम्पनी हुँ जससँग सेवाहरू छन् जुन बहु उद्योगहरूमा काम गर्दछ भने, मसँग मेरो सेवाको लागि उद्योग लक्षित पृष्ठहरू हुन सक्छन्। त्यस सेवाको विवरण, लाभ, प्रमाणपत्र, मूल्य निर्धारण, आदि को एक विशाल बहुमत एक उद्योग पृष्ठ देखि अर्को एक समान हुन सक्छ। र त्यो पक्कै पनि अर्थ राख्छ!
तपाइँ बिभिन्न व्यक्तिहरूको लागि निजीकृत गर्न क्रममा सामग्री पुनःलेखनमा भ्रामक हुनुहुन्न, यो एक बिल्कुल स्वीकार्य केस हो नक्कल सामग्री। यद्यपि मेरो सल्लाह यहाँ छ:
अनौंठ पृष्ठ शीर्षकहरू प्रयोग गर्नुहोस् - मेरो पृष्ठ शीर्षक, माथिको उदाहरण प्रयोग गरेर, सेवा र पृष्ठ समावेश छ कि उद्योग को समावेश छ।
अद्वितीय पृष्ठ मेटा विवरण प्रयोग गर्नुहोस् - मेरो मेटा विवरण अनौंठो र लक्षित साथै हुनेछ।
अद्वितीय सामग्री शामिल गर्नुहोस् - जबकि पृष्ठ को ठूलो swaths डुप्लिकेट हुन सक्छ, म उपशीर्षक, इमेजरी, diagram, भिडियो, प्रशंसापत्र, आदि मा उद्योग समावेश गर्छु अनुभव सुनिश्चित गर्न को लागी लक्षित दर्शकहरु को लागी लक्षित छ।
यदि तपाईं आफ्नो सेवाको साथ industries उद्योगहरू खुवाउँदै हुनुहुन्छ र यी pages पृष्ठहरूलाई अद्वितीय यूआरएलहरू, शीर्षकहरू, मेटा वर्णनहरू, र पर्याप्त प्रतिशत (कुनै डाटा बिना मेरो पेट %०% छ) सामेल गर्दछौं भने तपाईं चलाउन सक्नुहुन्न। गुगलको कुनै पनि जोखिम सोच कि तपाईं कसैलाई धोका दिन कोशिश गर्दै हुनुहुन्छ। र, यदि यो सान्दर्भिक लि with्कको साथ राम्रोसँग डिजाइन गरिएको पृष्ठ हो ... तपाईं ती मध्ये धेरैलाई राम्रो दर्जा दिन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ एक ओभरभ्यूको साथ प्यारेन्ट पृष्ठ सम्मिलित गर्न सक्दछ जुन प्रत्येक उद्योगको लागि उप-पृष्ठहरूमा आगन्तुकहरूलाई धक्का दिन्छ।
के हुन्छ यदि म भौगोलिक लक्ष्यीकरणको लागि शहर वा काउन्टी नामहरू परिवर्तन गर्दछु?
डुप्लिकेट सामग्रीको केही नराम्रा उदाहरणहरू मँ देख्छु SEO फार्महरू जुन प्रत्येक भौगोलिक स्थानमा उत्पादनहरू वा सेवाले काम गर्छन् पृष्ठहरू लिन्छ र नक्कल बनाउँदछ। म दुई छत कम्पनीहरूसँग काम गरें जुनअघिका एसईओ परामर्शदाता थिए जुन दर्जनौं शहर निर्माण गर्दछन्। केन्द्रित पृष्ठहरू जहाँ तिनीहरू केवल शहरको नाम शीर्षक, मेटा विवरण र सामग्रीमा प्रतिस्थापित गर्छन्। यसले काम गरेन ... ती सबै पृष्ठहरू वर्गीकृत गरियो खराब.
एक विकल्पको रूपमा, मैले एउटा सामान्य फुटर राखें जुन उनीहरूले सर्भ गरेका शहरहरू वा काउन्टीहरू सूचीबद्ध गरे, सेवा क्षेत्र क्षेत्र पृष्ठ राखे जुन उनीहरूले सेवा गरेका क्षेत्रको नक्साको साथ, शहर पृष्ठहरू सबैलाई सेवा पृष्ठमा पुनर्निर्देशित… र बूम ... सेवा पृष्ठ र सेवा क्षेत्र पृष्ठहरू दुबै श्रेणीमा आसमान छ।
साधारण स्क्रिप्टहरू वा प्रतिस्थापन सामग्री फार्महरू प्रयोग नगर्नुहोस् यस प्रकारको एकल शब्दहरू प्रतिस्थापन गर्न ... तपाईं समस्याको लागि सोध्दै हुनुहुन्छ र यसले काम गर्दैन। यदि म १ roof वटा शहरलाई समेट्ने छाना हो भने ... म बल्क लिंकहरू र समाचार साइटहरू, पार्टनर साइटहरू, र समुदाय साइटहरू बाट मेरो एकल छत पृष्ठमा देखाउँदै उल्लेख गर्दछु। त्यसले मलाई श्रेणी दिनेछ र कतिवटा शहर-सेवा संयोजन कुञ्जी शब्दहरूको म एक पृष्ठको साथ श्रेणीकरण गर्न सक्दिन।
यदि तपाईंको एसईओ कम्पनीले फार्मलाई यस्तै स्क्रिप्ट गर्न सक्दछ, गुगलले यसलाई पत्ता लगाउन सक्दछ। यो भ्रामक छ र, लामो समय मा, तपाईं वास्तवमा दंडित हुन सक्छ।
अवश्य पनि, त्यहाँ अपवादहरू छन्। यदि तपाईं बहु स्थान पृष्ठहरू सिर्जना गर्न चाहानुहुन्छ जुन अनुभवलाई निजीकृत गर्नका लागि अनौंठो र सान्दर्भिक सामग्री थियो, त्यो छली छैन ... त्यो व्यक्तिगतकृत हो। एउटा उदाहरण शहर भ्रमण हुन सक्छ ... जहाँ सेवा उस्तै हो, तर अनुभवमा भौगोलिक रूपमा धेरै भिन्नता छन् जुन इमेजरी र वर्णनमा विस्तृत गर्न सकिन्छ।
तर के बारे मा 100% मासूम डुप्लिकेट सामग्री?
यदि तपाईंको कम्पनीले एक प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गर्‍यो, उदाहरणका लागि, यसले यसको राउन्ड बनाएको छ र बहु ​​साईटहरूमा प्रकाशित गरिएको छ भने, तपाईं अझै पनि यसलाई तपाईंको आफ्नै साइटमा प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ। हामी प्राय: यो देख्छौं। वा, यदि तपाईले एउटा ठूलो साइट मा लेख लेख्नुभयो र तपाइँको साइट को लागी प्रकाशित गर्न चाहानुहुन्छ भने। यहाँ केहि राम्रा अभ्यासहरू छन्:
क्यानोनिकल - एक प्रामाणिक लि your्क तपाइँको पृष्ठ मा एक मेटाडेटा वस्तु हो कि गुगल बताउँछ कि पृष्ठ नक्कली हो र उनीहरु जानकारी को स्रोत को लागी एक फरक यूआरएल मा हेर्नु पर्छ। यदि तपाइँ WordPress मा हुनुहुन्छ, उदाहरण को लागी, र एक Canonical URL गन्तव्य अपडेट गर्न चाहानुहुन्छ, तपाइँ यो संग गर्न सक्नुहुन्छ रैंक मठ एसईओ प्लगइन। क्यानोनिकलमा उत्पत्ति URL थप्नुहोस् र Google ले तपाईंको पृष्ठ नक्कल छैन र मूल क्रेडिट योग्य छ भनेर सम्मान गर्नेछ। यो यस्तो देखिन्छ:
पुनर्निर्देशित - अर्को विकल्प भनेको केवल एक यूआरएललाई स्थानमा डाइरेक्ट गर्नु हो जुन तपाईले पढ्न चाहानुहुन्छ र खोज इन्जिनलाई अनुक्रमणिकामा जान्छ। प्राय: यस्तो समय आउँदछ जुन हामी वेबसाइटबाट नक्कल सामग्री हटाउँछौं र हामी सबै तल्लो-श्रेणीगत पृष्ठहरू उच्च-श्रेणीकरण पृष्ठमा पुनःनिर्देशित गर्दछौं।
noindex - पृष्ठलाई नोइन्डेक्समा चिन्ह लगाउनाले र खोज इञ्जिनहरूबाट बाहेक खोजी ईन्जिनले पृष्ठलाई बेवास्ता गर्दछ र यसलाई खोज इञ्जिन नतीजाहरूबाट टाढा राख्छ। गुगलले वास्तवमै यसको बिरूद्ध सल्लाह दिन्छ,
गुगलले तपाइँको वेबसाइटमा नक्कली सामग्रीको लागि क्रलर पहुँच रोक्न सिफारिस गर्दैन, चाहे त्यो एक रोबोट.टक्सट फाईल वा अन्य विधिहरूको साथ होस्।
यदि मसँग दुई बिल्कुल डुप्लिकेट पृष्ठहरू छन् भने, म यसको सट्टा एक प्रमाणिक वा पुनःनिर्देशित गर्दछ ताकि मेरो पृष्ठमा कुनै पनि ब्याकलिks्कहरू उत्तम पृष्ठमा पठाइन्छ, यद्यपि।
के हुन्छ यदि कसैले तपाइँको सामग्री चोर्दै र पुनः प्रकाशित गर्दैछ?
यो मेरो साइट को साथ प्रत्येक केहि महीनों मा हुन्छ। म मेरो सुन्ने सफ्टवेयरको साथ उल्लेख पाउँदछु र फेला पार्छु कि अर्को साइटले मेरो सामग्री उनीहरूको रूपमा प्रकाशित गरिरहेको छ। तपाईंले केहि चीजहरू गर्नुपर्दछ:
साइटलाई उनीहरूको सम्पर्क फाराम वा ईमेल मार्फत सम्पर्क गर्ने प्रयास गर्नुहोस् र यसलाई तुरुन्त हटाउन अनुरोध गर्नुहोस्।
यदि तिनीहरूसँग सम्पर्क जानकारी छैन भने, एक डोमेन Whois खोजी गर्नुहोस् र उनीहरूको डोमेन रेकर्डमा सम्पर्कहरू सम्पर्क गर्नुहोस्।
यदि तिनीहरूको डोमेन सेटिंग्समा गोपनीयता छ भने, उनीहरूको होस्टिंग प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस् र उनीहरूको ग्राहकले तपाईंको प्रतिलिपि अधिकारको उल्लंघन गरिरहेको छ भनेर उनीहरूलाई बताउनुहोस्।
यदि तिनीहरूले अझै पनी पालना गरेनन्, तिनीहरूको साइटका विज्ञापनदाताहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् र उनीहरूलाई थाहा दिनुहोस् कि उनीहरू सामग्री चोर्दैछन्।
अन्तर्गत एउटा अनुरोध फाइल गर्नुहोस् डिजिटल मिलेनियम प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम.
SEO प्रयोगकर्ताहरूको बारेमा हो, एल्गोरिदमहरू होइन
यदि तपाइँ केवल मनमा राख्नुहुन्छ कि एसईओ प्रयोगकर्ता अनुभवको बारेमा हो र हराउन केहि एल्गोरिदम होइन, समाधान सजिलो छ। तपाइँको श्रोतालाई बुझ्ने, ठूलो स greater्लग्नता र सान्दर्भिकताको लागि सामग्रीलाई निजीकृत गर्ने वा विभाजन गर्नु ठूलो अभ्यास हो। एल्गोरिदमलाई धोका दिन खोज्नु भयानक हो।
प्रकटीकरण: म एक ग्राहक र को एक सम्बद्ध हुँ रैंक मठ.
टैग: संबद्धक्यानोनिकलशहर पृष्ठहरुकाउन्टी पृष्ठहरूनक्कल सामग्रीनक्कल सामग्री दण्डस्थानीय एसईओस्थान आधारित पृष्ठहरूबहु-स्थानmultilocationमिथकnoindexजैविक खोजजैविक खोज रैंकिंगर्याङ्किङ्गसान्दर्भिकrobots.txtएसईओएसईओ उत्तम अभ्यासहरूएसईओ मिथकसामग्री चोरी
मेटा विवरण के हो? जैविक खोजी ईन्जिन रणनीतिहरूमा तिनीहरू किन महत्वपूर्ण छन्?